BangEa - Programmatic yekutengesa software download
Nguva Yemusika & Pend Order
Musika & Pend Order
Kuvhara panel Kutsigira mabasa
Positive Wedzera Nzvimbo
Zvakanaka Wedzera Roti x
Positive Wedzera Limit
Reverse Wedzera Space
Reverse Wedzera Roti x
Auto Vhura uye Vhura
Hedg Imwe Symbol
Forum peji peji
Yese-saiti EA software yakasununguka kushandisa
EA ndiyo chidimbu chenyanzvi chipangamazano akangwara otomatiki yekutengesa system.
Programmatic yekutengesa software.
Ziva zvakazara otomatiki kutengesa kweK-line angle
Uyu mubvunzo wakamutswa neshamwari mu EA BANG forum. Muchokwadi, basa iri haridi kuitwa chiratidzo, nekuti iyo iripo EA inogona kuzviziva. Pane nzira mbiri dzekuzadzisa izvi. Ko mutsetse wek-line ndeupi? Iwo mutsetse wakaumbwa nekubatanidza N […]
Musiyano pakati pechirongwa chekutengesa EA uye script
EA: Nguva imwe neimwe mutengo uchichinja, kodhi muEA inourayiwa kamwe chete; Script: Mushure mekunge script yatanga, kodhi inoitwa kamwe chete. Kuti isu tinzwisise musiyano nemazvo, VaTang veEA Bang vakanyanya kunyora EA uye script kuratidza, basa rayo nderekuburitsa nguva. […]
Tora IP kero ye server yekutengesa
Ichi chinodiwa chakasimudzwa neshamwari muEA State forum pamberi. Anga achishandisa yedu programmatic EA kutengesa kazhinji, uye nzira yekutengesa ndeyeiyo yekuraira brashi mhando. Isu tese tinoziva kuti iyo transaction yekumhanyisa ine pesvedzero huru pane zano renguva dzose kutengeserana. Anowanzo shandisa VPS […]
Neimwe EA inodzora mirairo yeimwe EA, unogona kuita izvi.
Mukuita kwekushandisa purogiramu yekutengesa, wakambosangana nemamiriro ezvinhu akadaro here? Nzvimbo yekuvhura yeAEA iri nani, uye nzvimbo yekuvhara yeBEA iri nani. Zvingave zvakakwana kana maEA maviri aya achigona kubatanidzwa pamwechete! Kazhinji, isu tinoshandisa 1 EA kuvhura nekuvhara zvinzvimbo. Kana ndichida kubata […]
Nezve iyo parameter yekumisikidza faira yechirongwa chekutengesa, zvakakwana kuverenga chinyorwa ichi
Nzira yekushandisa sei EA's configuration file? Mushandisi anga achishandisa Bang EA's Hedging EA yekutengeserana kwakasiyana-siyana. Mabasa eEA software anogara achipfumiswa. Nekufamba kwenguva, kune mazana eEA mabasa, saka ingoshandisa mamiriro eiyo otomatiki pani kuvhura nekuvhara zvinzvimbo. Semuenzaniso, kune akawanda […]
Maodha ekudzosera kumashure ekurasa nzira akavimbika here?
Mukati memakore gumi apfuura ekutengeserana kwakaedzerwa, imwe nzira yekutengeserana yenguva dzose yakaita kurasikirwa kwakadzikama, uye mukuita izvi, yakatevedzwa zvakasimba maererano nehurongwa hwayo hwekutengesa. Mumusika weramangwana, mukana wekurasikirwa zvechokwadi wakanyanya kukwirira, uye inogonawo kunge iri kurasikirwa. Kana tikatevedzera nzira yekutengesa mu […]
EA kutengesa otomatiki inochengetedza zvidzitiro
Cherechedza: Ichi chinyorwa chinotamiswa kubva www.eabang.com. Ichi chinyorwa vhidhiyo yakanyorwa naVaTang. Kune avo vasingafarire kuona mavhidhiyo, munogona kuverenga chinyorwa. Maitiro ekutora otomatiki zvidzitiro kana EA ichivhura nekuvhara maodha? Iri basa chikumbiro kubva kunhengo yeEA. Anowanzo shandisa purogiramu yekutengeserana. Iye ane […]
Nzira yekunzwisisa sei musiyano pakati pezuva bar uye macrocycle?
Musiyano unonyanya kuuya kubva kubhawa chimiro mune dzakasiyana fixe d nguva. Sezvinoratidzwa mumufananidzo uri pasi apa, senge 1-miniti chati uye chati yezuva nezuva, akawanda K-mitsara mune 1-miniti chati inogona kungova nenhamba shoma yeTICKs. Munguva yenguva isingashande yemamwe marudzi asingafarirwe, iyo K-line yeminiti imwe inochinja […]
Chii chandinofanira kuita kana EA ikasavhara maodha
1.Dzvanya pakanzi "Buy Open" kana "Tengesa Vhura" muPaneru Yekuvhura kuti utarise kana paine odha yakazadzwa.Kana pasina hurongwa hutsva, Ndokumbira utarise kana mt4 nemt5 dzapinda, uye kuti "Algo Trading" uye "Bvumira DLL inotengeswa kunze kwenyika" inobatidzwa.EA kuisirwa 2.Kana paine odha nyowani, isina kuvharwa maodha asina kubatwa, Isa […]
Hedg imwe chiratidzo
Iri basa rinoshandiswa kune akawanda zviratidzo. Mushure mekunge Ose T / P muvharo yekuvhara inotangwa, huwandu hwehupfumi hwayo hunovhara kurasikirwa kunotungamirirwa neEA iyi kune yakanyanya kurongeka, uye yakawanda sei inogona kuvharwa; Pofit> 0: Pundutso yemirairo miviri yakakomberedzwa yakakura kupfuura 0; Kurasikirwa kweakaundi kunofanira>%:Kuyangarara kurasikirwa/Banlence> 5%.
peji 1 peji 2 peji 3 ... peji 19
Forum nyaya dzichangoburwa
Hedging EA v3.8.8.4 dhawunirodha uye gadziridza tsananguro yebasa
Multi-symbols parameters, yanga ichimhanya kwemwedzi mishanu, uye purofiti ndeye makumi mashanu
Hedging EA v3.8.8.3 dhawunirodha uye gadziridza tsananguro yebasa
Yakazara S/P kuseta yekuvhara pani
© 2022 BangEa. Yakavakwa uchishandisa WordPress uye ColibriWP Theme .